‘लोकतान्त्रिक व्यवसायीलाई संगठित गर्ने अभियानमा छौं’ - Damak No.1 Online Patrika
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, असार २७, २०७६
बबरजंग थापा ( किरण ) दमकका व्यवसायिक क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो । उनले दशक बढीदेखि अटो प्लाजासहित विभिन्न आधा दर्जन व्यवसायिक फर्म सञ्चालन गरिआएका छन् । लामो समयदेखि दमकलाई कार्यक्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिआएका युवा व्यवसायी थापा लोकतन्त्रवादी व्यवसायीहरुको संगठन लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ तदर्थ समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।
लोकतन्त्र प्रति आस्था राख्ने हरेक व्यवसायीहरुलाई संगठीत गर्नका लागि केहि महिना अघि मात्र लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघ गठन गरिएको र त्यसको नेतृत्व गरिआएका छन् उनले । थोरै वोल्ने र मिजासिला स्वभाव भएका थापा दमक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व तृतीय उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
प्रस्तुत छ : दमक ५ निवासी सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशील युवा व्यवसायी थापासंग व्यवसायीक अनुभव र संघको भावी योजनामा बारेमा गरिएको कुराकानी ।
केहि महिना अघि मात्र लोकतान्त्रिक व्यवसायी उद्योग वाणिज्य संघ गठन गर्नुभयो , यो कस्तो संगठन हो ?
मुख्यतय दमक आसपासमा रहेका हामी लोकतन्त्र प्रति आस्था,विचार ,चिन्तन राख्ने व्यवसायीहरु संगठित हुनुपर्ने महषुष लामोसमयदेखि गर्देआएका ,भोगिआएका थियौं । गत मंसीरमा लामो छलफल र कुराकानीवाट यसले औपचारिक रुपमा स्थापना हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । हामी व्यवसायीहरुका धेरै खाले समस्याहरु छन्,ती सवै समस्याहरुलाई थोरै भएपनि संस्थाथत रुपले हामीले पनि योगदान दिन सकौं भनेर नै यस संघलाई स्थापना गरेका हौ । त्यसो त हामी लोकतन्त्रवादी विचार राख्ने व्यवसायीहरुको छुट्टै संगठन पनि चाहिएको हुदाँ यसले संस्थागत स्वरुप पाएको छ । हामी सवै लोकतन्त्रवादी व्यवसायीहरुलाई संगठित हुन आव्हान संगै सदस्यता विस्तार गरिआएका छौं ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव नजिकिदै गर्दा यो संघको किन आवश्यकता महषुष भयो नी ?
राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । जहाँसम्म यो संघको स्थापना दमक उद्योग वाणिज्य संघका लागि मात्र सिमीत होला भनेर कसैको मनमा थोरै भएपनि शंका उपशंका भए आजदेखि नै हटाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले चुनावका वेला यसका गतिविधि बाहिर आउनु स्वभाविक नै हो । हामी शुरुवाती क्रममा छौ, यस क्षेत्रका हरेक व्यवसायीहरुको पसल पसलमा जादै गर्दा धेरै उद्योगी,व्यवसायीहरुको अगाध आस्था,भरोसा प्राप्त गरिआएका छौं ।
किनकी यो संघ विल्कुल छुट्टै उद्देश्य र परिस्थतिबाट निर्माण भएकाले हामीले दमकका उद्योगी,व्यवसायीहरुका व्यवसायिकसंगै अन्य सामाजिक सुरक्षाको हितका निम्ति दुरगामी लक्ष्य लिएर यसलाई यसक्षेत्रका व्यवसायीहरुको माझ स्थापना गरेका छौ । जहाँसम्म दमक उद्योग वाणिज्य संघको विरुद्ध होइन् उसका हरेक गतिविधिहरुलाई कामको मूल्याङकन गरेर साथ र सहयोग दिन पनि यस संघले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
यो संघ नेपाली कांग्रेस नजिकका उद्योगी, व्यवसायीहरुको संगठन हो ?
हामी उद्योगी ,व्यवसायीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखिआएका विदितै छ । राजनीतिक चेतनासंगै आफनो अधिकारका लागि दल छान्ने नैसर्गिक अधिकारलाई हामी सवैले प्रयोग गरिआएका छौ,जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । जहाँसम्म यो संघ पनि लोकतन्त्र प्रति लामोसमयदेखि जनताका माझ काम गरिआएको नेपाली कांग्रेससंग नजिकको सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । हरेक व्यवसायी कुनै न कुनै दल संग नजिक छन् । दमकमा हेर्नुस, त्तत्कालीन माओवादी केन्द्र , एमालेको व्यवसायीक संगठन लामोसमयदेखि संगठित छ । हामी कांग्रेसहित लोकतन्त्र प्रति आस्था राख्ने विभिन्न समूह,स्वतन्त्र व्यवसायीहरुको साँझ संस्था निर्माणका अभियानमा छौं । यसलाई दल संग जोडेर हेर्नुभन्दा दमकका आवश्यकतालाई चिर्ने प्रयासमा छौं । निश्चय पनि यसले व्यवसायिक वृद्धिविकासमा सहयोग पुरयाँउने छ ।
यस संघले हाल के गरिआएको छ ?
हामीले यस संघलाई यस क्षेत्रका उद्योगी,व्यवसायीमाझ आफना उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर घरदैलो,पसल,प्रतिष्ठानसम्म पुग्ने गरि कार्यक्रम अघि सारेका छौं । व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न तथा उनीहरुका सामाजिक सुरक्षाका निम्ति तथा अन्य रचनात्मक कार्य गर्न सकिने विभिन्न कार्यक्रमहरु शसक्त ढंगले ल्याउन लागेका छौं । त्यसो त कार्यसमितिका वैठकले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मूलभूत समस्या समाधान गर्न व्यवसायीहरुका छाता संस्था दमक उद्योग वाणिज्य संघले खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समिक्षा गरिएकाले त्यसलाई चिर्न हामीले एजेण्डामुखी कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं । छिट्टै ती कार्यक्रम सार्वजनिक गरि संगसंगै संस्थागतका रुपमा सदस्यता विस्तार समेत अघि बढाउने तयारीमा छौं । साथीहरुलाई निर्धक्कका साथ यस संघमा संगठित हुन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका प्रति सन्तुष्ट छैन् भन्न खोज्नु भा हो ?
निश्चय पनि । वाणिज्य संघको वर्तमान समितिको कार्यकाल सकिन लागेका वेला गाली गर्ने तरिकाले पटक्कै दोष लगाएको होइन् । यो समितिको कार्यकालको समीक्षा गर्ने वेला आएको छ । यसो सर्सती हेर्दा पनि यो समितिले कुनै नौलो तथा परिमाणमुखी कार्य गर्न सकेको देखिएन् ।
हिजोको दिनचर्या भन्दा ठोस कार्यसम्पादन विल्कुलै भएनन् । हामीले अपेक्षा गरेका थियौ की यस वाणिज्य संघमा सवै खाले व्यवसायीले मेरो पनि हो भन्ने अपनत्व गर्ने अवस्था सृजना गर्न सकेनन् । केहि काम अवश्य भए होलान तर समग्रमा वाणिज्य संघको भूमिका प्रभावकारी वन्न सकेन् भन्ने ठम्याई हाम्रो हो ।
जहाँसम्म यो संघको स्थापना दमक उद्योग वाणिज्य संघका लागि मात्र सिमीत होला भनेर कसैको मनमा थोरै भएपनि शंका उपशंका भए आजदेखि नै हटाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले चुनावका वेला यसका गतिविधि बाहिर आउनु स्वभाविक नै हो । हामी शुरुवाती क्रममा छौ, यस क्षेत्रका हरेक व्यवसायीहरुको पसल पसलमा जादै गर्दा धेरै उद्योगी,व्यवसायीहरुको अगाध आस्था,भरोसा प्राप्त गरिआएका छौं ।
वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचन नजिकिदै गएको छ , त्यसको तयारीमा संघ लाग्यो हो ?
निर्वाचन नजिकिदै जादाँ हरेक व्यवसायीको आफू उम्मेदवार वन्न पाउने अधिकारलाई हामी सवैले सम्मान गर्ने पर्छ । त्यसमाथि नेतृत्व हत्याउनका लागि दलीय आस्था नजिकका व्यवसायिक संगठनहरुले त तयारीमा लागिसकेका होलान । तर, हाम्रो संघले संस्थागत रुपमा पहिलो पटक वाणिज्य संघको निर्वाचनमा होमिदै गरेको अवस्था छ । हामीमा संस्थागत रुपमा देखिएको यस एकताले आसन्न निर्वाचनमासफलता प्राप्त हुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
जहाँसम्म वाणिज्य संघको सवैको सहमतिमा सक्षम कार्यसमिति वनाउन जरुरी भएको पाएको छु । सवै दलीय आस्था व्यवसायी जो सक्षम हुनुहुन्छ ,व्यवसायीका हरेक समस्यामा समय दिन सक्ने साथीहरुलाई समेटेर संघको नेतृत्व चयन हुन सके त्यसले प्रभावकारीता पाउने अवस्था वन्ने छ । यद्यपि सहमति जुट्न सकेन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत संघले नेतृत्व पाउने छ । निर्वाचनमा जानु पर्ने देखिए हामीसंग विचार मिल्ने व्यवसायिक आस्था राख्ने दल तथा व्यवसायीहरुसंग मिलेर पनि जान सकिने विकल्प खुला राखेका छौं ।
सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जाने स्थिति आएको हो त ?
हामीलाई विल्कुल दम्भ छैन् । मैले अघि पनि भने,दमकका हरेक व्यवसायीहरुको भरोषायोग्य संस्थाका रुपमा दमक उवासंघलाई विकास गर्न जरुरी छ ।त्यसका लागि दलीय सहकार्यबाट नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । हामी स्वतन्त्र व्यवसायीको नाममा कलंक राजनीति गर्न चाहन्नौ । सत्य र यथार्थताको धरातल भन्दा यस संघलाई एक इन्च पनि तलमाथि हुन नदिने ढृणतामा छौं ।
तर हामी व्यवसायीहरुले संस्था भित्र दलीय प्रभाव राख्नु हुदैन् । दलीय विचार र विभेद जन्मिए निश्चय पनि त्यसले समग्र व्यवसायीको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् । जहाँसम्म, आसन्न निर्वाचनमा हामीले दलीयसंगै सर्वपक्षीय सहमति ,सहकार्य गरेर अघि वढ्ने लक्ष्य राखेका छौं । समय आउदै छ , सवैसंग वार्ता,संवादलाई संगसंगै अघि बढाउने छौं ।
‘जिल्लामा पार्टी थप सुढृण बनाउने लाग्ने छु ’
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरवार छोड्दा २ ट्रक सुनका बिस्कुट लगे: किशोर श्रेष्ठ, भिडियो कुराकानी
समय मिलाउन सकियो भने समस्या हुँदैन : लिङ्देन
‘कमलकै नमुना वडा बनाउने अभियानमा छौं ’